Elgeco plus Stadium: handray ny sehon-dry Jerry Marcoss, Dalvis, Arione Joy… | NewsMada
Elgeco plus Stadium: handray ny sehon-dry Jerry Marcoss, Dalvis, Arione Joy…
Toerana vaovao, hanampy ireo kianja fialamboly rehefa alatsinain’ny Paska, ny eny amin’ny Elgeco Plus Stadium. Ankoatra ny lalao baolina kitra, handray fampisehoana goavana ny toerana.
“Lundi de Pâques vaovao be 2019”. Io ny anarana nampisalorana ny hetsika hotontosaina ny alatsinainy 22 avrily izao, eny amin’ny Elgeco Plus Stadium, By-Pass. Araka ny fampahafantarana notontosaina teny an-toerana, omaly, afaka mandray fampisehoana goavana koa ity toerana vaovao ity, ary hosantarana amin’io alatsinainy io izany.
Mpanakanto maromaro no nosafidina hanafana ny fotoana, eto amin’ity kianja vaovao ity. Anisan’izany ry Arione Joy, Dalvis, Stanros, Simonda Valera ary i Jerry Marcoss. Hisahana ny fanentanana kosa i Tokiky. Ankoatra ireo, hisy mpikosoka kapila avy ao amin’ny Dago Mix Club hifandimby hanafana ny sehatra, sy eny anelanelan’ny fiakaran’ireo mpanakanto an-tsehatra.
“Hetsika vaovao, hampiarahana ny fialamboly sy ny fanatanjahantena no niarahanay niketrika. Hitanareo fa kianja vaovao vao avy notokanana ity ka handray lalao baolina kitra izany amin’io fotoana io. Eto amin’ny toerana malalaka ivelan’ny kianja kosa no hanaovana ny fampisehoana goavana”, hoy ny avy ao amin’ny Tropic Faya, mpiara-mikarakara ny hetsika amin’ny JM production sy ny Elgeco Plus.
“Fanombohana ihany io. Mbola hiitatra tsikelikely ny toerana, araka ny nambara tamin’ny fitokanana. Vonona handray hetsika hafa sy lehibe kokoa hatrany izahay aoriana”, hoy kosa ny nambaran’ny tompon’andraikitra voalohan’ny Elgeco Plus.
“Hifandimby an-tsehatra eo izahay fa tsy hofaritana ny anjaran’ny tarika tsirairay. Ankoatranay eny an-tsehatra, efa nanomana fialamboly hafa maro ho an’ny mpanatrika koa ny mpikarakara. Hisy ao ny fifaninanana dihy, ny tanisam-baolina, sns. Mbola kilalao hafa koa ilay fisarihana mety hahazoana scooter”, hoy i Jerry Marcoss, anisan’ny hiantoka betsaka amin’ny fanafanana ny fotoana.
Marihina fa hisy ny lalao kitra firahalahiana, hifanandrinan’ny Elgeco Plus sy ny ekipa voafantina avy any Antsirabe, amin’io fotoana io. Hofaranana amin’ny afomanga kosa ny fotoana rehetra, raha ny fanazavana hatrany.